Banaanbax iyo dagaal ka dhacay Beledweyne & Wararkii ugu danbeeyay | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Banaanbax iyo dagaal ka dhacay Beledweyne & Wararkii ugu danbeeyay
Banaanbax iyo dagaal ka dhacay Beledweyne & Wararkii ugu danbeeyay
Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan waxaa xalay ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar kamid ah Shacabka Beledweyne loogana soo horjeedo in Madaxweynaha Hir-Shabeelle in uu halkaasi tago & dagaal kooban oo geystay dhimasho iyo dhaawac.
Banaanbaxa ayaa waxaa dhigay Boqolaal dadweyne ah oo taageero ka helayay Jabhadda uu hoggaamiyo Janeraal Xuud, waxaana ay isugu soo baxeen afaafka hore ee irida lama galaay, iyaga oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah Maamulka Hir-Shabeelle.
Nabaddoon Cilmi Hagar oo kamid ah Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan oo banaanbaxa ka hadlay ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan Maamulka Hir-Shabeelle, waxaana uu sheegay in Gaajo gobanimo leh la qaadan karo laakin dhereg Gunnimo leh aan la qaadan karin.
Dbinaca kale dagaal kooban ayaa gudaha Magaalada Beledweyne waxaa uu ku dhexmaray Ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad uu watay Janeraal Xuud, kadib markii Janeraalka uu Ciidamo la soo galay, waxaana dagaalka uu khasaaro dhimasho & dhaawac ah kasoo gaaray labada dhinac.
Banaanbaxa iyo dagaalka ka dhacay Magaalada Beledweyne waxaa waxaa kasii horreeyay Ciidamo la wareegay Xarunta Maamulka ee lama galaay, kuwaas oo kasoo horjeedo Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo la sheegay inay ku wajahan yahay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Previous articleAfhayeenkii Maamulka Gobolka Hiiraan oo is casilay & Xiisad Culus oo wali ka taagan
Next articlePuntland oo digniin culus kasoo saartay roobab dabeylo wata oo kusoo wajahan